देउवा र पौडेल बिचको केमेस्ट्री
2017-10-10 01:34:02 | Comments: 0
कांग्रेसलाई नेपालका आम नागरिकले मात्रै होइन विश्वले नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने पार्टी भनेर चिन्दै आएको छ । अन्य राजनीतिक दललाई भन्दा छिमेकी र भौगोलिक दृष्टिका हिसावले टाढाका मित्रराष्ट्रले कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने आधार पनि सायद यही नै हुुनसक्छ । तर राजनीतिमा यस्तो देखिदैन । पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका बर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कारण अहिले कांग्रेसले विश्वसामु आफ्नो विश्वास गुमाउदै गएको छ । हुनतः देउवा जव जव शक्तिमा आउँछन, तव तव मुलुक र प्रजातन्त्रमाथि केहि न केहि अनिष्ट भइरहन्छ । देउवाले २०५९ सालमा आफु प्रधानमन्त्री भएको वेलामा प्रजातन्त्रलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए, व्यवस्थापिका संसद विघठन गरेर । त्यसपछि प्रजातन्त्रलाई पुनःस्थापन गर्न दलहरुले २०६२०६२ को १९ दिने जनआन्दोलन गर्नु प¥यो । त्यसभन्दा अघि उनलाई कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्र विपरित काम गरेको भन्दै साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । नयाँ पार्टी गठन गर्नु देउवाको मुख्य उद्देश्य थियो, प्रधानमन्त्री बन्नु । केहि समय आफ्नो त्यो अभिष्ट प्रधानमन्त्री बनेर पुरा पनि गरे । तर, उनलाई तत्कालीन राज ज्ञानेन्द्रले असक्षमको बिल्ला लगाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाईदिए ।
संकटमा नयाँ शक्ति
2017-08-30 04:42:36 | Comments: 0
डा. बावुराम भट्राईको नयाँ शक्ति पार्टी संकटमा परेको छ । धुमधामकासाथ र यही चुनावमा बहुमत ल्याउने दावी गरेको नयाँ शक्तिमा बावुराम र उनकी पत्नी हिसिलायमि मात्र बाकी रहेका छन । सवैले छोडदै जादा र यो बेला सम्म आइपुदा उनका सवैभनदा निकट मानिएका देवेन्द्र पौडेलले पनि छाडे । यसैकारण उनले पौडेल सहितका १५ नेतालाई स्पष्टिकरण सोधेका छन । यसको अर्थहो अव उनीसंग कोही पनि रहेनन यो दम्पत्ति बाहेक । राजनीति ठीक ठाउमा भएन भने भावनात्मक रुपले संगठन चल्दो रहेन छ भन्ने नया खुलने हरुका लागि यो एउटा पाठ हुनु पर्छ । यही क्रम बढदै गए एकदिन उनलाइ हिसिलालेपनि छाडेको समाचार आउन सक्त छ । उनको गनतव्य त्यतै तिर लागेको देखापर्ने थालेको छ ।
कस्तो सरकार ? भएर पनि नभएको जस्तो ?
2017-04-20 15:01:42 | Comments: 0
कुुनै पनि कुरा छ, भने त्यो देखिनुु पर्छ । त्यो कुरा भएको महसुुस जनताले गर्न सक्नुु पर्छ । तर सरकारको हकमा अहिले यो केही पनि भएको छैन । सरकार खाली औपचारिक सभा समारोह, सभा, गोष्ठी र भ्रमणमा मात्र सिमित रहेको छ । सरकारले कुुनै नयाँ परिवर्तन अथवा भनौ, कुनै नयाँ कामको सुरवात नै गर्न नसकेको महसुुस जनताले गरेकाछन । तर यो महुुसस जनताले बिना सुझबुुझ त्यतिकै गरेका होईनन । अहिले एक्काईसौं शताव्धीका जनता धेरै स्मार्ट भईसकेकाछन । अहिलेका जनताले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अर्थात भनौ राज्यबाट खासै केही नपाएको अनुुभव गरेकाछन ।
नेपाल दक्षिण एशिया नै पहिलो
2017-04-20 13:56:01 | Comments: 0
महिला सांसदहरुको संख्या धेरै हुुनेमा नेपाल दक्षिण एशियामा नै पहिलो नम्वरमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार नेपालको संसद्मा महिलाहरुको हिस्सा दक्षिण एसियामा पहिलो र विश्वमा ४८औं स्थानमा देखिएको हो । तथ्यांक अनुसार नेपाल संसद्मा २९ दशमलव छ प्रतिशत महिला सहभागितासहित विश्वको ४८औं स्थानमा रहेको देखिएको छ ।
काँग्रेसको अवको रणनीति कस्तो ? नेतृत्व साम अब कस्ता छन, चनौतीहरु ?
2016-04-21 05:06:32 | Comments: 0
नेतृत्व साम अब कस्ता छन, चनौतीहरु ?